Shacabka Kenya oo u dareeray Sanaadiiqda Codbixinta. – Shabakadda Wararka Amiirnuur
August 8, 2017 8:22 am by admin Views: 55
Dadweynaha reer Kenya ayaa saakay ku kalahay Xarumaha Codbixinta si ay usoo doortaan Madaxweyne cusub oo dalkaasi uu yeesho.
Dadku waxay sidoo kale soo dooran doonaan Xildhibaannada Baarlamaanka, Senatarrada Golaha sare, Gudoomiyeyaasha gobollada, iyo kuwa degmooyinka.
Kormeerayaal ka socda Qaramada Midoobey, Midowga Afrika iyo Ururka Midowga Yurub ayaa ku sugan dalka Kenya, kuwaas oo indhaha kuhaya doorashooyinka iyo sida ay u socdaan, waxaana jira walaac ah in wax is daba marin la sameeyo.
Haddii ay dhacdo in wax is daba marin la sameeyo, waxaa hubaal ah in natiijada soo baxda ay gaashaanka ku dhuftaan Axzaabta Mucaaradka Kenya, taas oo keeni karta in dalkaasi ay ka dhacaan rabshado iyo iska hor imaadyo dhexmara taageerayaasha Musharixiinta ugu cad cad ee doorashada.
Sidoo kale, waxaa jirta cabsi laga qabo weerarro ka dhaca gudaha dalka Kenya oo ay fuliso Xarakada Alshabaab, iyadoo maalmihii lasoo dhaafay ay Alshabaab soo saareen Muuqaallo kala duwan oo digniinno ay ugu dirayeen Shacabka ku nool dalka Kenya.